आफैंलाई घाइते पारेका सलमान ऐश्वर्या रायको बिल्डिङबाट हाम फाल्न तयार ! – साँचो खबर
आफैंलाई घाइते पारेका सलमान ऐश्वर्या रायको बिल्डिङबाट हाम फाल्न तयार !
यद्यपि, सलमानले आफूलाई आफ्नो गल्ती महसुस भइसकेको र ऐश्वर्याका पितासँग कुनै पनि समस्या नभएको बताएका थिए । एक अन्तर्वार्तामा ऐश्वर्याले भनेकी थिइन्, ‘म सलमानको रक्सी पिउने बानी र त्यसपछिको दुर्व्यवहारबाट वाक्क भइसकेकी थिएँ । उनले मलाई जथाभावी गाली गर्थे । शारीरिक र मानसिक तनाव दिन्थे ।
Previous: विप्लवको जनसरकार घोषणा, जनअदालत देखि जनसेनासम्म फाल्गुनमा बटालियन घोषणा गर्ने
Next: बाबुराम भट्टराईले भने – मृत्युअघि लेखेको स्टाटसलाई गम्भीर ढंगले लिऊँ